नचिनेका नम्बरबाट फाेन अाएर हैरान हुनुहुन्छ ? अब त्याे नम्बर कसकाे हाे यसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ – Todays Nepal
By Todays Nepal | नेपाल आज	 Last updated Jan 3, 2018
तपाईको मोबाइलमा सेभ नभएको वा नचिनेको नम्बरबाट आएको फोन कसले गरेको हो भनेर सजिलै पत्ता लाग्ने एप्स नेपाली बजारमा आएको छ ।तपाइँको मोबाइलमा घण्टी बज्नासाथ कसले फोन गरेको हो भन्ने कुरा सहजै पत्ता लाग्छ । नेपालीले नेपालीकै लागि बनाएको यो एप्स नेपाली बजारमा पहिलो हो । नेपाली बजारमा पनि केही यस्ता एप्स छन् जो तपाइँको दैनिक जनजीवनमा महत्वपूर्ण सावित भएका छन् ।
अब तपाइँ सिधै गुगल प्लेस्टोरमा गएर नेपालीले नेपालीकै लागि बनाएको यो एप्स प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । विश्व बजारमा एप्सको प्रतिष्पर्धा भैरहेका बेला नेपाली बजारमा पनि त्यस्तै खालका एप्सहरु सार्वजनिक हुने क्रममा मोबाइल प्रयोगकर्तालाई ध्यानमा राखेर “Nepal Caller : नेपाल कलर ” गुगल प्लेस्टोरमा राखिएको हो ।
अहिले यो एप्लिकेसन एन्ड्रोइड भर्सनमा मात्र उपलब्ध रहेको र यस एपले छिट्टै प्रयोगकर्ताको विश्वास जित्नेछ भन्ने आशा गरेका छौं ।
डाउनलोड कसरी गर्ने ?
तपाइँको मोबाइलमा रहेको गुगल प्ले स्टोरमा जानुहोस्, “Nepal Caller” सर्च गर्नुहोस् । अनि त्यसमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ ।
आजभोलि के गर्दैछिन् नेपाली पोर्नस्टार अर्चना पनेरु ?
नेपाली फिल्म उधोग सम्म छाएकी पोर्नस्टार अर्चना पनेरु आजकल गंगबु को मून वाल्कर डान्स बार मा काम गरिरहेकी छिन् ।
अर्चना की आमा सुनिता पनेरु पनी त्यहि डान्स बार मा काम गर्छिन गत वर्ष नेपाली फिल्म उधोग मा छिरेकी अर्चना अहिले भने डान्स बर तीरै मस्त छिन ।
अब सजिलै मुक्तिनाथ
कागबेनी उकालो लागेपछि धेरै तीर्थालुलाई लाग्थ्यो– अब यो भीर कसरी चढ्ने होला ? यो केही वर्षअघिको कुरा हो । अब भीर देख्नेबित्तिकै आत्तिने दिन गए । सडक सुविधाले यात्रुलाई यो बाटामा सधैं डुलिरहन पाए हुन्थ्योझैं लाग्छ ।
प्राकृतिक रूपमा मनमोहक त छ नै । सफा, शान्त र स्निग्ध पनि छ । त्यसैमा कालोपत्रे सडक मुस्ताङको ‘सुनमाथि सुगन्ध’ जस्तै बनेको छ । विकसित मुलुकको झल्को दिने गरी फनफनी घुमेको छ, मुक्तिनाथ मन्दिर जाने सडक । ३८ ठाउँका ठूला घुम्ती पार गर्दा मन्दिर पुग्ने जोकोहीलाई लाग्छ, कुनै अर्को ग्रहमा पुगिरहेको छु ।
सडकबाट सजिलै उत्तर र दक्षिणतर्फका हिमालय शृंखलाको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । दक्षिणतर्फको धौलागिरि हिमाल र उत्तरतर्फका नीलगिरि र थोराङ्लापास शृंखलाले पर्यटकलाई निकै लोभ्याउँछन् । १० वर्ष अघिसम्म सामान बोकेका खच्चडको लर्को देखिन्थ्यो । यात्रु घोडामा ओहोरदोहोर गरेका भेटिन्थे । बेनीदेखि मुक्तिनाथसम्म कच्ची सडक बन्यो । जिप चल्न थाले । अहिले खच्चड देख्नै मुस्किल पर्छ । घुमफिरका लागि आउने पर्यटकले रहरले मात्र घोडा चढ्छन् । जब सडक फराकिलो बन्यो अनि साना सवारी होइन, ठूला बसको यात्राबाटै सजिलै मुक्तिनाथ मन्दिर पुग्ने सुविधा मिलेको छ । यही असोजदेखि सञ्चालनमा आएको कागबेनी–मुक्तिनाथ कालोपत्रे सडकले ठूला सवारी चलाउन झनै सहज बनाइदिएको छ ।
सडक कालोपत्रे भएपछि मन्दिर पुग्ने दर्शनार्थीले सुविधा पाएका छन् । १२ किमि लामो यो खण्ड कुल २१ करोड लागतमा निर्माण भएको हो । दुई खण्डमा विभाजित गरेर काम सम्पन्न भएको जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले जनाएको छ । पहिलो खण्डमा एपेक्स जोशी जेभी कम्पनीले ७ किमि सडक निर्माण गरेको हो भने बाँकी ५ किमि एपेक्स अमिक कम्पनीले निर्माण गरेको हो । ०७२ असार २७ देखि काम सुरु भएको सडक निर्माण सम्पन्न गर्न ०७४ को असार २६ गतेसम्म म्याद दिइएको थियो । मन्दिर जाने सडकमध्ये यो खण्ड सबैभन्दा जोखिम मानिन्छ । गत वैशाखमा दर्शनार्थी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा ५ जनाको मृत्यु र ३५ जना घाइते भएका थिए ।
जोमसोमदेखि कागबेनीसम्म कालीगण्डकी करिडोरकै मूल सडकबाट सवारी पुग्नेछन् । त्यसपछि सवारी पूर्वतर्फ मोडिएर मुक्तिनाथ जाने ठाडो उकालो सडकतर्फ जानुपर्नेछ । पर्यटक र मन्दिर आउने दर्शनार्थीलाई मध्यनजर गरेर सडक कालोपत्रे गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । निकै जोखिम र डरलाग्दो भीर पार गर्नुपर्ने भएकालेकतिपय दर्शनार्थी कागबेनीदेखि हिंडेरै मुक्तिनाथ पुग्छन् ।
‘यो सडकमा निकै जोखिम मोल्नुपथ्र्यो । अहिले ढुक्कले गाडी चलेका छन्,’ बस तथा जिप व्यवसायी समिति अध्यक्ष मीनप्रसाद थकालीले भने । सडक कालोपत्रे भएपछि मुक्तिनाथ पुग्ने दर्शनार्थीको संख्या बढेको उनले सुनाए । कालोपत्रे ३ दशमलव ५ मिटर र सडक ६ दशमलव ५ मिटर फराकिलो छ । ढल, पर्खाल निर्माण गरिएका छन्, सबै सवारीलाई अनुमति दिइएको छ । यो सडक मन्दिरभन्दा अलि वर बसपार्कसम्म पुगेको छ । वातावरण नब्रिगियोस् भनेर मन्दिरको गेटसम्म सवारी लान निषेध गरिएको छ ।
हाल जिप पार्कदेखि मन्दिरसम्म घोडाको प्रयोग हुँदै आएको छ । हिंड्न नसक्नेले घोडा प्रयोग गरे पनि अधिकांश दर्शनार्थी जिप पार्कदेखि १० मिनेट हिँडेरै मन्दिर पुग्ने गर्छन् । कोरलादेखि बेनीसम्मको कालीगण्डकी करिडोर सडकभन्दा अगावै कागबेनीदेखि मुक्तिनाथ पुग्ने बाटो कालोपत्रे गरिएको हो । कागबेनी–मुक्तिनाथ सडक मुस्ताङकै पहिलो कालोपत्रे सडक हो ।
‘तोकिएकै मितिमा सडक निर्माण सक्यौंं, प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर रवीन्द्र तिवारीले भने, ‘यो सडक नै मुस्ताङको पहिलो कालोपत्रे सडक हो ।’ सडक छिटो सम्पन्न गर्न दुई खण्डमा विभाजित गरेर दुईवटा ठेकेदार कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिइएकाले समयमै सकिएको उनले बताए । यो सडकमा वर्षभरि नै सवारी चलाउन सकिने उनले जानकारी दिए ।
यी राशि भएका पुरुषप्रति महिलाहरू हुन्छन् बढी आकर्षित
भारतीय चर्चित महिला कमेडियन भारती सिंह नेपाली चेली !